Denmark oo Qaxootiga ku samaynaysa Arin lala yaabay | shumis.net
Home » Layaab » Denmark oo Qaxootiga ku samaynaysa Arin lala yaabay
Dowlada Denmark ayaa shalay soo bandhigtay arin cusub oo aduunka oo dhan la yaabay, taasoo ay ku doonayaan in ay qaxootiga cusub ku cabsi galiyaan in ay iska dhiibaan wadankaasi.
Dowlada Denmark ayaa sheegtay in qaxootiga wadanka soo gala la baari doono oo dhamaan waxyaabaha ay la yimaadaan laga qaadan doono, wixii lacag ah, dahab, dheeman iyo waxkasta oo kale marka laga reebo lacag aan ka badnayn 3000kr, faraantiga guurka iyo moobeelka.
Dhamaan waxyaabaha laga qaado dadka qaxootiga ah ayaa Booliska Denmark iibin doonaan, iyadoo lacagta ka soo xaroota loo isticmaali doono in lagu bixiyo qarashka qaxootiga. Arintaan ayaa lagu tilmaamay isbaaro caadi ah oo ay dowlada Denmark kula kacayso qaxootiga.
Denmark ayaa sanadkaan la filayaa in ay iska dhiibaan 20.000 qof, halka Sweden ay filayso 200.000 qof.
Dowlada Denmark ayaa sanadihii dambe waxay ahayd mid si weyn uga soo horjeeda soo galootiga, iyadoo dhamaan xisbiyada wadankaasi ay isku raaceen in Denmark ay albaabada ka xirato qaxootiga. Arintaan ugu dambeysay oo aad loo cambaareeyay ayaa ah mid xad-dhaaf ah oo lagu baaranayo dadka masaakiinta ah.
Title: Denmark oo Qaxootiga ku samaynaysa Arin lala yaabay